Voahosotry ny tsilo - Church of God of Switzerland Switzerland
lahatsoratra > Fiainana miaraka amin'Andriamanitra > Voahangy amin'ny tsilo
Rehefa nampangaina ho nanao heloka bevava mendrika ho faty tany amin’ny fitsarana i Jesosy, dia nandrandrana tsilo tamin’ny satroboninahitra vonjimaika ny miaramila ary nametraka izany teo amin’ny lohany.9,2). Ary nampitafiny lamba volomparasy Izy sady naneso Azy hoe: Arahaba, ry Mpanjakan’ny Jiosy!
Nanao izany ny miaramila mba hampifalifaly ny tenany, kanefa ny Filazantsara dia nampiditra an’io tantara io ho ampahany lehibe amin’ny fitsarana an’i Jesosy. Miahiahy aho fa manenona ity tantara ity izy ireo satria misy fahamarinana maneso - Jesosy no Mpanjaka, fa ny fanjakany dia hialohavan'ny fandavana, fanesoana ary fijaliana. Manana satroboninahitra tsilo izy satria izy no mpitondra an’izao tontolo izao feno fanaintainana, ary amin’ny maha-mpanjakan’ity tontolo ratsy ity, dia nampiseho ny zony hitondra tamin’ny alalan’ny fijalian’ny tenany ihany izy. Voahosotra tamin'ny tsilo izy (tamin'ny alàlan'ny fanaintainana lehibe ihany) (nomena fahefana izy).
Zava-dehibe ho antsika koa
Ny satro-boninahitry ny tsilo dia manan-danja amin'ny fiainantsika koa - tsy ampahany amin'ny sehatry ny sarimihetsika izay ahatohina antsika amin'ny fijaliana izay nolalovan'i Jesosy ho Mpanavotra antsika. Jesosy dia nilaza fa raha te-hanaraka Azy isika, dia tokony hitondra ny hazo fijaliantsika isan'andro - ary afaka manao izany tsotra izao isika fa tokony hanao satrobilo tsilo. Nampifandraisantsika amin'i Jesosy ao anaty vilany feno fijaliana.
Ny satroboninahitra tsilo dia misy dikany amin'i Jesosy ary misy dikany ho an'ny olona rehetra izay manaraka an'i Jesosy. Tiako izany 1. Ny Bokin’i Mosesy dia milazalaza ny fomba nandavan’i Adama sy i Eva an’Andriamanitra ary nanapa-kevitra ny hanandrana ny ratsy sy ny tsara.
Tsy ratsy ny mahafantatra ny tsy fitovian'ny tsara sy ny ratsy - fa misy diso maro amin'ny fijaliana ratsy satria lalan'ny tsilo, ny lalan'ny fijaliana. Hatramin'ny nahatongavan'i Jesosy nanambara ny fahatongavan'ny fanjakan'Andriamanitra, dia tsy mahagaga raha mandà azy ny olombelona, ​​izay mbola tafasaraka amin'Andriamanitra, ary nanambara izany tamin'ny tsilo sy ny fahafatesana.
Nanaiky izany fandavana izany i Jesosy - nanaiky ny satro-boninahitry ny tsilo - amin'ny ampahany amin'ny kapoaka mangidy mba hijaly izay fijalian'ny olona mba hahafahany manokatra varavarana hialantsika eto amin'ity tontolo feno ranomaso ity. Eto an'izao tontolo izao, ny fanjakana dia mametraka tsilo amin'ny lohan'ny olom-pirenena. Eto an-tany dia niaritra izay rehetra tian'izy ireo hatao i Jesosy mba hahafahany manavotra antsika rehetra amin'ity tontolon'ny tsi-Andriamanitra ity sy ny tsilo.
Ny tontolo ho avy dia hotarihin'ny olona izay naharesy ny lalan'ny tsilo - ary ireo izay nanome azy ny tsy fivadihany dia handray ny toerany ao amin'ny governemanta amin'ity famoronana vaovao ity.
Isika rehetra dia miaina ny satroboninahitry ny tsilo. Tsy maintsy mitondra ny hazofijaliantsika isika rehetra. Isika rehetra dia miaina eto amin'ity tontolo lavo ity ary miombona amin'ny alahelony sy ny fanahiany. Kanefa ny satroboninahitra tsilo sy ny hazo fijalian’ny fahafatesana dia nahita ny fifanandrifian’izy ireo tao amin’i Jesosy, izay nampirisika antsika hoe: “Mankanesa atỳ amiko, hianareo rehetra izay miasa fatratra sy mavesatra entana; Te hamelombelona anao aho. Ento ny ziogako ka mianara amiko; fa malemy fanahy sy manetry tena ao am-po Aho; ka hahita fitsaharana ho an'ny seleniumo ianao. Fa malemy ny ziogako ary maivana ny entako” (Mat 11,28- iray).